Torban Oromoo Magaalaa Lakkuu Minneapolis, MN kessati ta’e – August 2017
August 28, 2017 in Oromia
ያልተሳካዉ የወያኔ ህወሀት የዘመናት ጸሎት. Part 5. Aman Hedato
WAASHINGITAN, DIISII (VOA Afaan Oromoo) — Ministiriin dhimma-alaa, ka Yunaayitid Isteets, Itiyoophiyaa keessa jeeqamni uummataa fi murtii seeraa tii ala hidhuun jiraachuu mala – jechuudhaan, gara sanatti imaluun akka balaa qabaqachuu malu akeekkachiistee jira. . Keessumaa naannawa Gonderii fi Bahir-daar, akkasumas, godinaalee Oromiyaa garii keessatti tasgabii-dhabinsi itti fufuun isaa gabaasamee jira – ka jedhu, ministriin […]
Wallee Qabsoo Bilisummaa
Oduu gara garaa – Hagayya 28, 2017
“Ilmi Oromoo Baratee Eessa Iyyuu Hin Gawu” By Feyera Sobokssa We have never been at peace ever since our land was conquered by the Abyssinian external forces often known by our parents as “Gaadduus. Our parents had a valid reason to say “Ilmi Oromoo baratee eesa iyyuu hin gawu.” When loosely translated, it is like saying, […]
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo (Qeerroo Bilisummaa Oromoo, 27 Hagayya 2017, Oromiyaa) Koreen Aduulaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hagayya 27 bara 2017 teessoo ariifachiisaa guyyaa tokkoof gaggeessee jira. Teessoo kana irrattis haala yeroo ammaa Oromiyaan keessatti argamtuu walhuabchiisee jira. Kanuma waliins, duula itti fufiinsaan gaggeeffamuu qabu irratti kallattiii kaayeera. Akka kanaanis, mirga abbaa biyyummaa kabachiifachuuf wareegama olaanaa ummati […]
Koree Qindeessituu Irreechaa 2017 irraa
Saba tokko saba biraa irraa waan addaan baasan keessaa warri gurguddaan Aadaa fi Afaan isaati. Bu’uurri ykn hundeen afaanii ammoo aadaa akka ta’e qoratoonni ni dubbatu. Aadaan akkaataa jiruu fi jireenya saba tokkoo calaqqisa ykn ibsa. Kunis bifa hedduun ibsamuu danda’a. Akkaataa sabni tokko uffatu, sirbu ykn wallisu, mana ijaarratuu fi meeshaalee mana keessatti gargaaramu, […]